आहा मनाङ ! जाने होइन घुम्न ? (तस्बिरहरु) access_timeबैशाख १९, २०७८
मनाङ भन्ने बित्तिकै हामीलाई सम्झना आइहाल्छ–हिमालपारीको जिल्ला । मनाङ जति दुर्गम छ, त्यति नै सुन्दर पनि छ । हिमाली जीवनशैली, भेषभुषा, संस्कार, रीतिथिति र रहनसहनलगायत मनाङका विशेषता हुन् । गण्डकी प्रदेशको विकट पहाडी भूभागमा पर्ने मनाङमा आन्तरिक पर्यटनलाई...
कर छुटसँगै राहत प्याकेजको विशेष व्यवस्था गर्न हानको माग access_timeबैशाख १४, २०७८
काठमाडौं । होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) ले विशेष आर्थिक प्याकेजसहित कर जरिवाना छुटसहित विद्युत महसुल समेतको छुटको माग गर्दै सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सुझाव दिएको छ । मंगलबार संस्थागत रुपमा सरकारलाई सुझाव दिँदै हानले कोभिड–१९ को प्रभाव होटल क्षेत्रल...
कोरोना कहरः पुनः सुनसान बन्यो सौराहा access_timeबैशाख १४, २०७८
चितवन । कोभिड–१९को पहिलो लहरले थिलोथिलो बनेको सौराहाको पर्यटन क्षेत्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन नपाउँदै पुनः दोस्रो लहर शुरु भएपछि व्यवसायी निरास छन् । पहिलो लहरको कोरोना घट्दै गएपछि व्यवसाय लयमा फर्किँदै थियो । क्षेत्रीय होटल सङ्घका अध्यक्ष दीपक भट्टर...
पर्यटक पल्काउन कोसेली घर access_timeबैशाख १२, २०७८
युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्मथलो ओखलढुङ्गामा पर्यटकको आकर्षणका लागि कोेसेली घर सञ्चालनमा आएको छ । स्थानीय युवा योगेश्वर राजभण्डारीले ऐतिहासिक ओखलको ढुङ्गो र युगकविको जन्मथलो नजिकै कोसेली घर सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । यगकवि श्रेष्ठको चर्चित ‘मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा&r...
पर्यटक लोभ्याउँदै कुश्माः अब काली गण्डकी माथि बन्नेछ ११ करोडको लगानीमा सिसाको स्काइ बृज र जिपलाइन access_timeबैशाख ९, २०७८
पर्वत । अग्ला र लामा झोलुङ्गे पुलको क्षेत्र भनेर चिनिएको पर्वतको कुश्मा पछिल्लो समय पर्यटकहरूका लागि आकर्षणको​ केन्द्र बनेको छ । यो क्षेत्रले एडभेन्चर पारखीहरुलाई आकर्षित गर्दै गइरहेको छ । यहि माहौललाई मध्यनजर गरेर हार्नेस जिपलाइन प्रालिले रिसोर्ट सहित जिपलाइन, ह्य...
पर्यटनमा परेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि काम गर्छौँ : मन्त्री ढकाल access_timeबैशाख ७, २०७८
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सरकारले प्रक्रिया शुरु गरेको बताएका छन् । आज यहाँ पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले कोरोना कहरका कारण पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको बताए । ...
हनुमन्तेडाँडा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै access_timeबैशाख २, २०७८
– प्रभु जिरेल चरिकोट । दोलखाको वैत्येश्वर गाउँपालिका र जिरी नगरपालिकाको सिमानास्थित हनुमन्तेडाँडा यतिखेर आन्तरिक पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य बनेका छन् । ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकसित भइरहेको हनुमन्तेडाँडामा पछिल्लो समय दैनिक पर्य...
पोखराको सेती खोंचमा ८ करोडको लगानीमा बन्जी निर्माण, नयाँ वर्षसँगै व्यावसायिक सञ्चालनमा आउने access_timeचैत ३१, २०७७
काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी पोखरा साहसिक खेलहरूका लागि निकै प्रख्यात छ । साहसिक खेलहरु मध्येको बन्जी अब पोखराको सेती खोँचमा पनि शुरु भएको छ । बन्जी नेपाल एड्भेन्चर्स प्रालिले पोखरा रातोपैरा (माउन्टेन म्युजियमको आडैमा) बनाएको बन्जीको सफल परीक्षण भएको छ। लेक ...
नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा नगरकोटमा चहलपहल बढ्यो access_timeचैत ३१, २०७७
नगरकोट । नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोटमा आन्तरिक पर्यटकको बाक्लो चहलपहल देखिएको छ । नगरकोटमा तारेदेखि साना गरेर ६७ वटा होटल सञ्चालनमा रहेका छन् ती होटलमा कार्यरत रहेका १ हजार ३ सय जना कर्मचारी र श्रमिकहरुको काम गर्दै आइरहेका छन् । कोरोन...
नयाँ वर्षमा पोखरा जाँदै हुनुहुन्छ ? यी हुन् घुम्ने ठाउँ access_timeचैत ३१, २०७७
पोखरा । नयाँ वर्षमा घुमघामका लागि पुग्नैपर्ने रमणीय ठाउँ हो पोखरा । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बनेको पोखरा पछिल्लो समय चाडपर्व र कामको थकान मेट्नका लागि जाने नयाँ गन्तव्य नै बनेको छ । लामो समयसम्म कोभिडको त्रासले रोकिएको घुमघाम गर्ने प्रवृत्...
सौराहमा विदेशी पर्यटक देखिन छाडे, व्यवसायी चिन्तित access_timeचैत २७, २०७७
काठमाडौं । नेपालको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र सौराहमा विदेशी पर्यटक आउने क्रम नबढेपछि व्यवसायीहरु मारमा परेका छन् । विदेशी पर्यटक अत्याधिक आउने सौराहामा कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी भएपछि पर्यटक आउन छाडेका थिए । तर बन्दाबन्दी हटेको लामो समय ...
पर्यटन गतिविधि सहजः एक महिनामा भित्रिए १५ हजार विदेशी नागरिक access_timeचैत १९, २०७७
काठमाडौं । कोरोना महामारी र लामो समयको बन्दाबन्दीपछि नेपालमा पर्यटन गतिविधि सहज हुन थालेको छ । कोरोना महामारीका कारण नेपाल सरकारले गरेको बन्दाबन्दीपछि हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै विदेशी पर्यटक मार्च महिनामा नेपाल भित्रिएका छन् । अध्यागमन विभागले सार्वजनिक गरेको...
भिटोफ नेपालमा थापाको प्यानल निर्विरोध access_timeचैत १६, २०७७
काठमाडौं । गाउँ पर्यटन प्रबर्द्धन मञ्च (भिटोफ) नेपालको चैत २० गते हुने निर्वाचनका लागि सोमबार भएको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता प्रक्रियामा पर्यटनकर्मी राजकुमार थापाको समूहको मात्र उम्मेदवारी दर्ता भएको निवार्चन समितिले जनाएको छ। विगतमा भिटोफको महासचिव भएर काम गरेका ए वा...
अनुमतिबिनै गोसाइँकुण्ड पुग्छन् हेलिकोप्टर access_timeचैत १६, २०७७
काठमाडौं । पछिल्लो समय काठमाडौँ–गोसाइँकुण्ड हेलिकोप्टर यात्रा विशेष चर्चामा छ । चार्टर्ड गरिएको हेलिकोप्टरबाट १५ मिनेट जान, १५ मिनेट आउन । ३० मिनेट घुमघाम गर्न । अनि, नीलकण्ठेश्वर महादेव (गोसाइँकुण्ड) को दर्शन गरेर जम्माजम्मी एकघण्टामै गोसाइँकुण्डको यात्रा स...
पर्यटन मन्त्रीसमक्ष १७ बुँदे मागपत्र बुझाइयो access_timeचैत १०, २०७७
काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्रको पुनर्जीवन र श्रमिकको जीवन रक्षाको माग गर्दै पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक प्रतिनिधिमण्डलले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल समक्ष १७ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ । नेपाल ट्रेकिङ, ट्राभल्स, र्याफ्टिङ, एयरलाइन्स, संस्कृति पुरातात्व...
लुम्बिनीमा पर्यटक बढ्दै access_timeचैत १०, २०७७
सिद्धार्थनगर । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित भएको लुम्बिनी घुम्न आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा केही हप्तायता दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गएको छ । लुम्बिनी विकास कोषका सूचना अधिकृत राजन बस्नेतका अनुसार लुम्बिनी घुम्न आउने पर्यटकहरुको सङ्ख्या बढ्दै ...
ट्रेकिङ व्यवसायीको पीडा : बन्दाबन्दी खुले पनि व्यवसाय ठप्प access_timeचैत ५, २०७७
पोखरा । कोरोना संक्रमण (कोभिड–१९) का कारण अन्नपूर्ण पदयात्रामा जाने पर्यटक नपाउँदा ट्रेकिङसँग सम्वद्ध व्यवसायी संकटमा परेका छन् । बन्दाबन्दी खुलेको लामो समयसम्म पनि अन्नपूर्ण पदयात्रामा जाने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन नभएपछि पथप्रदर्शक (ट्रेकिङ गाइ...
माउन्टेन गाइड लाइसेन्स सिफारिसमा नेपाल पर्वतारोहण संघ अन्योलमा access_timeचैत ४, २०७७
काठमाडौं । पर्वतीय पथ प्रदर्शक (माउन्टेन गाइड) को नयाँ लाइसेन्स सिफारिसमा समस्या देखिएको छ । दशकौंपछि हालैमात्र खुल्ला भएको माउन्टेन गाइडको सिफारिसमा कुन योग्यतालाई सिफारिस गर्ने भन्नेमा नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) अन्योल बनेको हो । गत मंगलबारदेखि पर्यटन बो...
श्रमिकहरुले पठाए परिचालन समिति सदस्य access_timeचैत १, २०७७
काठमाडौं । पर्यटन व्यवसाय सम्वद्ध श्रमिक संघ संगठनहरुले श्रमिकहरुको तर्फबाट पदयात्रा तथा पर्वतीय पर्यटन श्रमिक कल्याणकारी कोष ऋण परिचालन सदस्य पठाएका छन् । लामो समयदेखि पर्यटन बोर्ड र श्रमिकहरूका बीच विवाद रहँदै आएको कोष परिचालनको विषयमा बोर्डले प्रतिनिधि पठाउन पत्राचार ग...
पर्यटकीय स्थलको ब्रान्डिङमा जुट्यो पर्यटन बोर्ड, पहिलो चरणमा बुद्धको जन्मभूमिको प्रचार गरिँदै access_timeचैत १, २०७७
नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यलाई ब्रान्डिङ गर्न शुरु गरेको छ । बोर्डले यसको शुरुवात गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट गरेको छ । लुम्बिनीको कला, संस्कृति र विविधताको संयोजन गरेर लुम्बिनीको ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने काम थालेको बोर्डले क्रमशः अन्य ...
सबै प्रदेशमा एकै प्रकारको पर्यटकीय गन्तव्य निर्माण गरिँदै, कसरी तान्ने पर्यटक ? access_timeफागुन २९, २०७७
सांसदहरुले पर्यटकीय गन्तव्य केन्द्र निर्माण गर्दा त्यसक्षेत्रको भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा कला संस्कृति र परम्परा झल्कने संरचना निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सात प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यहरुको सम्बन्धमा संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिल...
माउन्टेन गाइड लाइसेन्सको अनुमति खुल्यो access_timeफागुन २६, २०७७
काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्रमा लामो समयदेखि खुल्न नसकेको पर्वतीय पथ प्रदर्शक इजाजतपत्र (माउन्टेन गाइड लाइसेन्स) अनुमति अन्ततः खुल्ला भएको छ । बुधबार एक सूचना जारी गर्दै पर्यटन विभागले लाइसेन्सको आवेदन खुलेको जानकारी दिएको हो । नेपालको पर्वतीय पर्यटनलाई थप व्यवस्थित...
अब टान र एनएमए बाहेका संघ-संस्थाहरुले पनि पर्यटकको भिसा सिफारिस गर्न सक्ने access_timeफागुन २३, २०७७
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्ड (एनटीबी) ले विदेशी पर्यटक आगमनलाई थप केहि सहज बनाएको छ । बोर्डले यसअघि लागू गरेको भिसा अनुमति सिफारिसको व्यवस्थामा केही परिवर्तन गर्दै सहज बनाएको हो । आइतबार एक सूचना जारी बोर्डले ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) र नेपा...
१३ वर्षपछि पर्यटन बोर्डको उपाध्यक्षमा रिजाल मनोनित access_timeफागुन १९, २०७७
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डको उपाध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद रिजाल नियुक्त भएका छन् । गत मंगलबार बसेको बोर्डको कार्यकारी समितिले रिजाललाई उपाध्यक्षमा चयन गर्ने निर्णय गरेको हो । उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका रिजाल यसअघि बोर्डका कार्यकारी सदस्य समेत हुन् । गत माघ २३ गते बसेको बो...
पर्यटन व्यवसायीहरुको निश्कर्षः ५ दिने क्वारेन्टिन मापदण्ड नै पर्यटक आगमनको प्रमुख बाधक access_timeफागुन १७, २०७७
काठमाडौं । कोभिड–१९ पछि विदेशी पर्यटक आगमनमा सरकारले व्यवस्था गरेको मापदण्ड नै अहिलेको पर्यटन व्यवसायको प्रमुख चुनौतीको विषय भएको पर्यटन व्यवसायीहरुले निश्कर्ष निकालेका छन् । विदेशी पर्यटक आगमनमा सरकारले व्यवस्था गरेको अनिवार्य ५ दिनको होटल क्वारेन्ट...